Cameroon-RCA: xuduudka cusub ee lagu xiray Garoua-Boulaï - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Cameroon-RCA: xudduudda mar labaad ayaa loo xidhay Garoua-Boulaï
Cameroon-RCA: xudduuda cusub ayaa lagu xiray Garoua-Boulaï
Komishanka Zokombo ee RCA ee ku hoos jira maamulka Minusca kadib markii la xushay kacdoonkii FDPC, Tani 5 April 2019 (c) Xuquuqda la keydiyay
Yesterday 5 2019 April, dagaalka ayaa la sheegay in Zoukombo tuulada u dhexeeya mucaaradka oo ka mid ah Dadka Democratic Front Central Africans (FDPC) iyo ciidamada ammaanka ee Qaramada Midoobay in CAR, sida lagu sheegay hadal uu soo saaray Xasilinta Dalka Hawlgalka Qaramada Midoobay Nabadda ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika (Minusca).
Sida laga soo xigtay minusca, hawlgalka sameeyay tan iyo April 5 2019 by xubno ay gees ah dadka caasiya Miskine FDPC lagu qabtay degmada Zoukombo, Mambéré-Kadeï Prefecture, galbeed ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Waxay ogolaatay
sida laga soo xigtey ilo kale, si loo sii daayo gaadiidka 11 ee ka tirsan shirkad qaran oo Afrikaan ah oo la wareegay dhowr cisho oo ka tirsan fallaagadan FDPC.
Si kastaba ha ahaatee, ilo madaxbannaan oo ay la soo xiriiraan Shirkadda Qaranka ee Dhexe ee Afrika ayaa tilmaamaya in gaadiidka 11 uu sii daayay by Minusca oo ka tirsan shirkadda CFAO.
Iyadoo mucaaradka ayaa dalbaday madax furasho ah 100 milyan oo faran CFA qaadayo 31 shirkadda this qaranka ay si sharci-darro habboon tan iyo bilowgii ee toddobaadka, oo kaliya $ 20 milyan oo faran CFA waxay noqon lahayd bixiyo.
Dagaalyahanada, kadib markii ay ka dambeeyeen luminta, ugu dambeyntii waxay sii daayeen baabuurta 20 31 ee Bangui. Iyadoo loogu talagalay 11 kale, waxay dalbadeen madax-furashada 60 million CFA francs-ka ka hor inta aan la qaban wada hadal kasta. Waxa aan si cad loo sameynin, kuwan soo socda ayaa horeyba loogu yaqaanay howlgalada Minusca Jimcaha 5 April 2019.
Waa in aan xasuusnaano in tani ay tahay codsi ka yimid dowladda KMG ah ee 2015 mucaaradka FDPC iyo kuwo ku meel gaar ah ee dugsiga Zoukombo ka hor dhigista socda kooxaha hubaysan.
Si kastaba ha noqotee, diiwaanka rasmiga ah ee qaliinka ay fulinayaan ciidamada qalabka sida
Minusca ayaa ku warameysa in 5 ay dileen mudaaharaadyadii dhimashada iyo magaalada ayaa si buuxda loo faaruqiyay dadka deggan ilaa tan 5 April 2019.
Dhinaca Cameroon, waqtiga waa feejignaanta guud. "Tallaabooyin nabadgelyo oo adag ayaa loo qaaday si looga hortago in mucaaradka Afrikaanka ah ee ka soo horjeeda ciidda Maraykanka," ilo ammaan ayaa sidaas yidhi.
Qalabkaan, dadka rayidka ah ayaa sidoo kale ku lug leh. Guddiyada feejignaanta ee dhammaan xaafadaha iyo tuulooyinka ayaa dib loo soo nooleeyay si ay u soo sheegaan dhamaan kiisaska la tuhunsan yahay in ay hayaan mas'uuliyiin khibrad leh. Magaaladda Garoua-Boulaï ayaa hadda ku taala qaybo ka mid ah Ciidamada Difaaca iyo Ammaanka.
Ilo Good, Brigadier General Joseph Nouma 12ème ah Gaadhi lugta Brigade Bertoua haatan ku sugan magaalada xadka this in ay qaataan goobaha balliga iyo dib-u-abaabulo ciidamo la geeyay dhulka ku.
Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale la ogaaday in xadka u dhexeeya Cameroon iyo CAR si ku meel gaar ah loo xiray. Taliska sare ee millatariga ayaa ka walaacsan in dejinta nabadda iyo amniga ee CAR aysan saameyn ku yeelan doonin Cameroon.
Pär Crepin Bissoli ee Garoua-Boulaï | Actucameroun.com
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/06/cameroun-rca-la-frontiere-de-nouveau-fermee-a-garoua-boulai/
Dhibaatada ka jirta Suudaan: Dibadbaxayaasha markii ugu horeysay ee ka horreeya xarumaha ciidanka - JeuneAfrique.com
Weerarkii Marshal Haftar ee Liibiya: Tunisia iyo Algeria oo heegan u ah - JeuneAfrique.com